एक थर्मोस्टेट VAZ-2109 के हो, यसको प्रतिस्थापन आवश्यक भएको बेला, क्षति को मुख्य संकेत के हो, हामी यस लेखमा कवर हुनेछ। यस प्रकाशन यसको लाभ अलि कम बताए गरिनेछ बारे सुधार थर्मोस्टेट वाहन मोडेल 2110. को स्थापना पूरा गर्न कसरी एक विस्तृत विवरण समावेश छ। तपाईं सिद्धान्त सुरु गर्नुपर्छ ए, तपाईं कार्य जो त्यो कार्य थर्मोस्टेट, मा उपकरण कस्तो बुझ्न आवश्यक इन्जिन शीतलन प्रणाली आन्तरिक दहन इन्जिन को।
एक थर्मोस्टेट के हो?
नाम उपकरण implies, यो तापमान संग कुरा गर्छ। विशेष, को ठंडा प्रणालीमा तरल पदार्थ प्रवाह को स्विच को मद्दतले भने। यसबाहेक थर्मोस्टेट कार्बोरेटर वा इंजेक्टर पेट्रोलियम आधारित इन्धन इंजेक्शन सिस्टम आवास को नै संरचना र संरचना छ छन्। सञ्चालन मा, मोटर कुनै पनि थ्रोटलिङ प्रदर्शन एकाइ प्रदान गर्नुपर्छ। र कार्बोरेटर र इंजेक्टर: र यो कुनै पनि इंजेक्शन सिस्टम मा वर्तमान छ।
थर्मोस्टेट को कुनै पनि आधार - bimetal भनिने सामाग्री बनेको छ कि एक विशेष थाली। यो तापमान परिवर्तनको प्रतिक्रिया र विकृत सकिँदैन किनभने यो। वाल्व थाली, पानीका मुहानहरू द्वारा निश्चित छ जो सार्दा: यो प्रभाव आधारित स्विच हावा प्रवाह मा। आफ्नो शक्ति प्लेट विजयी भएको वाल्व, प्रभावकारी ठंडा प्रदान गर्न रेडियेटर को तरल पदार्थ प्रवाह बाटो खोल्ने उत्प्रेरित गर्छ।
क्षति को संकेत
कि थर्मोस्टेट VAZ-2109 असफल भएको छ पहिलो चिन्ह के हुन सक्छ? निस्सन्देह, इन्जिन उच्च स्थिर गति मा ड्राइभिङ गर्दा पनि तात्दै। कारण - तरल एउटा सानो सर्कलमा निरन्तर चलिरहनु जारी छ, रेडिएटरको एक थोपा प्राप्त गर्दैन। र यो यति बस बेकारी छ किनभने गर्न, प्रशंसक को पनि समावेश गर्न मद्दत गर्दैन। अलिकति अवस्था सुधार हुन सक्छ भन्ने मात्र कुरा हो - ट्याप खोल्ने र अधिकतम गति गर्न ओवन भित्री ब्लोअर स्विच छ।
तर यस्तो कार्य तातो मौसम सान्त्वना ल्याउन छैन। थर्मोस्टेट को सबै भन्दा साधारण विफलता - यो प्रारम्भिक स्थिति मा सेन्सर तत्व Jamming छ (एक सानो सर्कल मा तरल चाल)। यो भयो अचानक सबै भने, तपाईं उन्मूलन सबै विधिहरू प्रयास गर्न आवश्यक छ। पनि शरीर केही प्रकाश blows साथै वाल्व खोल्न सक्छ। बाटोमा आपतकालीन एक राज्य छ भने, तपाईं तरल मात्र एक ठूलो सर्कलमा circulates भनेर, सबै आन्तरिक थर्मोस्टेट तोड्न गर्न तरल पदार्थ सकिन छ। तर यो जोश छैन, र यो मर्मत को स्थान प्राप्त गर्न सम्भव छ।
प्रतिस्थापन लागि तयारी
कार थर्मोस्टेट प्रतिस्थापन गर्न तयार थियो, यो इन्जिन कम्तिमा अप 40-50 डिग्री तल ठंडा सम्म प्रतीक्षा गर्न आवश्यक छ। मा तातो तार काम धेरै खतरनाक छ, तपाईं जलाए प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। प्रदर्शन थर्मोस्टेट प्रतिस्थापन एक नगरेर सिस्टम - VAZ-2109 को लागि सबै भन्दा कठिन र अरोचक प्रक्रिया हो, एकदम छिटो छ। यो के गर्न दुई नाली प्वालहरू, (हात द्वारा unscrewed प्लग) रेडिएटरको को तल र इन्जिन ब्लक मा स्थित हो जो (को बोल्ट 13 को टाउको अन्तर्गत) प्रयोग गर्नुहोस्।
तर यहाँ सिस्टम एक अपेक्षाकृत उच्च लागत छ जो जाडोमा जम्न नदिने तरल बस्तु, भरिएको छ भने के हो? यो एक कार मर्मत गर्न धेरै महँगो थियो, यो राख्न प्रयास गर्न आवश्यक छ। सबै को पहिलो यो, गर्न, स्टोभ वाल्व खोल्ने, को भल्ब जान्छ कि पाइप मा कस्नु वोल्ट नट आदि खोल्नु गर्न। जाडोमा जम्न नदिने तरल बस्तु अधिकतम सम्भव रकम सकिन गर्न आवश्यक छ मार्फत। हो, यो प्रक्रिया सुस्त छ, तर यो तरल को लगभग सबै राख्नेछ। रेडिएटरको र आन्तरिक दहन इन्जिन ब्लक मा टोपी वोल्ट नट आदि खोल्नु यो सम्भव छ मात्र पछि। र वृद्धि दबाब गर्न विस्तार ट्यांक मा टोपी वोल्ट नट आदि खोल्नु गर्न नबिर्स।
यसले सम्पूर्ण प्रतिस्थापन प्रक्रिया हो - पुरानो नयाँ एक स्थापना, हटाइयो। तर यो ध्यानपूर्वक सबै जडानहरू निरीक्षण गर्न सिस्टम लाग्छ। जडान थर्मोस्टेट VAZ-2109। कार्बोरेटर वा इंजेक्टर को इंजेक्शन सिस्टम मा - महत्त्वपूर्ण छैन।
कलर तिर्न ध्यान काम गर्दा। पुरानो प्रयोग यसलाई नयाँ स्थापना गर्न राम्रो छ, अत्यधिक खराब छ। यसबाहेक, एउटा महत्त्वपूर्ण मापदण्ड विश्वसनीयता छ। कृमि प्रकार Clamps धेरै कोमल हो: यो एक सानो थप प्रयास गर्न आवश्यक छ, उहाँले संक्षिप्त गर्छ। र क्षति पाइप को संभावना धेरै उच्च छ। को कस्नु भन्दा-कस भने, यो मसूडों मार्फत तोड्न गर्न सम्भव छ। तर सानो कस, को पाठ्यक्रम, असम्भव, रूपमा त्यहाँ तरल पदार्थ को रिसाव हुनेछ छ। अर्को शब्दमा, यो एक डबल edged तरवार छ। र सल्लाह को एक टुक्रा: पाइप संग सम्पर्क हुनेछ जो थर्मोस्टेट, को सतह मा सीलेंट मनमोहक पातलो पत्र लागू स्थापना अघि।
"दर्जनौं" गर्न थर्मोस्टेट राम्रो?
निस्सन्देह, यो छैन "दस" को पहिलो संस्करण राखिएका छन् ती मोडेल बारे छ। थर्मोस्टेट VAZ-2109 (कार्बोरेटर) पहिलो "दस" मोडेल मा स्थापना गरिएको थियो कि एक धेरै समान छ। तर अब यो अझ आधुनिक मोडेल हो। आफ्नो मुख्य फाइदा Clamps संख्या न्यून पारिएको छ। तर इन्जिन ब्लक गर्न थर्मोस्टेट को संलग्न एक छोटो पाइप सन्तुष्ट छ। आवास दुई पिन संग आन्तरिक दहन इन्जिन ब्लक गर्न स्क्रूड छ। तापमान सेन्सर थर्मोस्टेट मा, त्यसैले दोस्रो खोल्ने दबाउनु स्क्रूड छ, आवश्यक।
साथै, थर्मोस्टेट "नौ" मा "दर्जनौं" मा सेट गर्दा त्यहाँ सेन्सर परिवर्तन गर्न सकिन्छ मात्र किनभने, एक सानो बचत गर्ने मौका छ। को निष्क्रिय लाभ बीच - हुड अन्तर्गत ठाउँ खाली। थर्मोस्टेट आवास जो यो सम्भव सजिलै क्लच केबल पागल समायोजन अघि, उदाहरणका लागि पहुँच, बनाउँछ, पाँच सेन्टिमिटर छोटो बन्नेछ।
म 2110 "नौ" मा थर्मोस्टेट सेट गर्न सक्नुहुन्छ?
यो प्रश्न को भाग अन्तिम अनुच्छेद जवाफ गरिएको छ। हो, तपाईं 2109 मा VAZ-2110 थर्मोस्टेट सेट गर्न सक्छन्, र यो कुरा छैन, "नौ" कार्बोरेटर र इंजेक्शन। वास्तवमा, "Eights" सुरु हुने, एउटै इन्जिन प्रयोग गर्नुहोस्। हामी के भन्न सक्छौं, पनि मा आधुनिक "अनुदान" को 80-एँ संग "आठ" र "नौ" मा प्रयोग गरिन्छ जो इन्जिन, स्थापना गर्न। प्रगति, केहि छैन भन्छन्। निस्सन्देह, यो कार्बोरेटर अब आधुनिक इंजेक्टर इन्धन इंजेक्शन प्रणाली, जो युरोपेली स्तरअनुसार, अप्रचलित 5-10 वर्ष पहिले छ सट्टा। र लगभग सबै घटक परस्पर छन्। त्यहाँ सानो मतभेद, सुधार हो, तर यो पूर्ण चित्र परिवर्तन गर्दैन।
को ठंडा सिस्टम भर्नु
तरल खन्याउन र रगत गर्न को ठंडा प्रणाली, तपाईंले केही मिनेटमा आवश्यक छ। सबै को पहिलो सबै जडानहरू सबै नली Clamps तंग छन् कि, सुरक्षित स्थापित गर्दै छन् कि जाँच गर्नुहोस्। त्यसपछि प्लग आन्तरिक दहन इन्जिन ब्लक र रेडिएटर कि स्थान मा जाँच गर्नुहोस्। भने, तिनीहरूलाई स्थापना गर्नुहोस्। अब तपाईं ओवन ट्याप खोल्न र विस्तार ट्यांक मा तरल खन्याउन गर्न सक्नुहुन्छ। gurgle भएनन् गर्न - डाट र इन्जिन सुरु भयो। न्यानो-अप सम्म प्रतीक्षा सञ्चालन तापमान मा हुनेछ - बारे 90 डिग्री। आवश्यक छ यदि जलाशय गर्न तरल पदार्थ थप्नुहोस्। यसलाई आफ्नो स्तर माथिल्लो र तल्लो अंक बीच छ कि आवश्यक छ।
काम गर्दछ थर्मोस्टेट संग छैन धेरै र कसरी थर्मोस्टेट VAZ-2109 जाँच गर्न छ, तपाईं धेरै राम्रो थाहा छ। को वाल्व खुलेको छ जब दोषपूर्ण तत्व पानी उम्लिरहेको मा डिप। यसले मात्र पूर्ण प्रतिस्थापन, मर्मत विषय छैन। तपाईं आफ्नो इन्जिन को प्रदर्शन सुधार गर्न चाहनुहुन्छ भने, त्यसपछि, को पाठ्यक्रम, थर्मोस्टेट को "दसौं" गर्न माउन्ट उचित। साँचो, जस्तै मोटर तापमान पाउन छैन रूपमा केही कठिनाइ, हुन सक्छ। यस मामला मा यो सिस्टम को जडान तत्व संशोधन गर्न आवश्यक छ। बाँकी रूपमा, यो आधुनिकीकरण धन्यवाद, गर्मी मात्र राम्रो हुँदैछ।
साइन "नयाँ चालक"
गेज के हो? नाप्ने दबाव लागि दबाव गेज
जंगला - "मुस्कान" कार
"निसान नोट": प्राविधिक विनिर्देशों
बालिका को व्यापक काँध: लगाउन के?
संसारमा सबै भन्दा राम्रो फोन। शीर्ष मोबाइल फोन
मिनिसिङ मासुको जज
मोरक्कन mandarins: वर्णन, गुण, स्वाद
Multivarka मा धुनमा। रसदार, स्वादिष्ट र सन्तोषजनक
महोदया डे Pompadour को फ्रान्स उमेर
मा फ्रिज मा गन्ध उन्मुक्ति कसरी केही सुझावहरू
विद्युतीय सर्किट मा प्रमुख तत्व को एक रूप अंतर एम्पलीफायर
गर्न रूसी सोभियत युग देखि घोडाहरू बारेमा घरेलू फिलिम,
Ovesol मूल्यांकन उपयोगी यदि एक डाक्टर लागू
रूस मा Glazer दिवस - कहिले र कसरी यो मनाउन?
मुख्य स्टोर स्वरूप के हो